Umtsalane 'Isixeko sidibana neLali' enemixholo yeApartment enendawo yokupaka yasimahla kufutshane nentliziyo yeKochi
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguDivya
Konwabele ukuhlala kwakho kule flethi ipholileyo, isanda kufakwa, ixhotyiswe kakuhle kude nengxakeko yesixeko. Thatha uhambo lwakusasa kwizitrato ezingenazo itrafikhi uyonwabele ubuhle obubukekayo! Emva koko xa uvukile, le ndawo isePalachuvadu, ishortdrive esuka Edapally Metro, Lulu mall, Vytilla Hub, Infopark, Fort Kochi & Mattanchery.
Ipropathi ihonjiswe ngobumnandi ngemibala eqaqambileyo kodwa epholileyo yeyakho ngokwenene. Indawo entle yokuphumla emva kosuku oluxakekileyo.
Wifi kunye yokupaka ifakiwe
Yindlu entsha ye-2BHK esembindini wesixeko kodwa yindawo yezindlu.
Sibonelela ngesitovu segesi, iketile yombane, i-oveni, ifriji, umatshini wokuhlamba njl.njl. Unokufikelela kwiTV nge-wifi, netflix, amazon prime & hotstar, isofa,itafile yokutyela kunye nebhedi yobukhulu bukakumkanikazi. Kananjalo iiwodrophu kunye negumbi lokuhlambela kuwo omabini amagumbi. Iibhalkhoni ezinembono entle kuwo omabini amagumbi okulala kunye nendawo yokutyela. Vula ikhitshi
Le ndawo ijikelezwe yimithi kunye namasimi kunye nezindlu. Kodwa unokufikelela kwindawo yokuzivocavoca, i-hypermarket, iindawo zokutyela (alfam, biriyani), salon, ukuthunga, iziqhamo, njl.njl kwimizuzu emi-4 yokuhamba kwiziko lasePalachuvadu.
Umbuki zindwendwe ngu- Divya
Unayo yonke iflethi kuwe. Sifumaneka ngefowuni 24 × 7